တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ဟာ လွတ်လပ်မှု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လေ့လာလှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်တွေကို ပိုတိုးတက်စေသလို အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ သဘောသဘာဝတွေကို ပိုပြီး နားလည်စေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သင့်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကို ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံကောင်းမွန်စေမယ့် အကြံပြုချက်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
(၁) Activities (လှုပ်ရှားမှု) များလုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ကျောင်းသွား၊ အိမ်ပြန် ၊ အပြင်ဘက် အတန်းသွားတာက လွဲလို့ တခြားဟာတွေ ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ ကျောင်းသားဘဝဟာ သာမန်ပါပဲ။ သင်ဘာကို စိတ်ဝင်စားလဲ? ဒီအချိန်မှာ အဲဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ အားကစားတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဂီတတူရိယာတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် အသစ်အသစ်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကို ကြိုးစားလုပ်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ဒါတွေက သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ (ဥပမာ ဆက်ဆံရေး) ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားအတွက်ပဲ ဖြစ်စေ၊ လုပ်အားပေးခြင်းက သင့်ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဘဝကို ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လုပ်အားပေးအဖွဲ့တွေနဲ့ အတူတူလက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို လွယ်လွယ်ရရှိတာဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။ ကာလရှည်အတူတူလက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်း လွယ်ကူတယ်လေ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကောင်းမွန်စေဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးကြီးပေါ့။ ဒါ့အပြင် သင်အလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာလည်း သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်က အများကြားမှာ ထင်ရှားနေမှာပါ။
အလုပ်ရှင်များအများစုက အလုပ်အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့သူ (သို့) အနည်းဆုံး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု ရှိတဲ့သူတွေကို ငှားရမ်းဖို့ ပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာ အတော်များများ သိထားပြီးသားပါနော်။ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါ ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည် ၂ခါ လောက်တော့ အနည်းဆုံး ရှိမှာပေါ့နော်.. ဒီအချိန်တွေအတွင်းမှာ တစ်လဖြစ်ဖြစ်၊ လအနည်းငယ် ဖြစ်ဖြစ်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ ပရောဂျက်ဖြစ်စေ ဝင်လုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကသာ အမှန်တကယ် လက်တွေ့လောကရဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ အလုပ်အခြေအနေတွေကို သေချာမြင်စေတာပါ။
(၄) Exchange သွားပါ
ယနေ့ခေတ်အလုပ်ခွင်တွေမှာ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကို ပိုတွေ့လာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံကလာတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ အလုပ်လုပ်နိုင်တာက အရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်က ကျောင်းဖလှယ်သွားဖို့ အခွင့်အရေး ကမ်းလှမ်းရင် ရအောင်ယူလိုက်ပါ။ ဒါဟာ အခြားယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ကျောင်းသားဘဝကို တွေ့ကြုံနိုင်မယ့် ရှားပါးတဲ့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အများနဲ့မတူဘဲ အလားအလာကွဲပြားခြားနားတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်တတ်ဖို့ သင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပိုနားလည်တတ်လာပြီး Cross-cultural respect လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ဘက်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားမှု အလေ့အထလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။
(၅) တခြားဌာနတွေက အတန်းတွေ ယူကြည့်ပါ
အခြားဌာနတွေရဲ့ အစပြုအတန်း ၁ ခု၊ ၂ခု လောက်ယူပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ဟာ အင်ဂျင်နီယာအသိပညာအပြင် အခြေခံဘဏ္ဍာရေးအသိပညာနဲ့ တင်ဆက်မှုစွမ်းရည်တွေရှိဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို သိခွင့်ရတဲ့အပြင် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို တွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့တက္ကသိုလ်နှစ်ဟာ သင့်ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကာလတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ဟာ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ နောင်ရေးကို ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့ ကာလလေးပါ။ သင့်ရဲ့ အိပ်မက်ဆီကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံနိုင်ပါသေးတယ်။
AutoCAD သင်ကြားပေးသော ဆရာ၊ ဆရာမများ >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-228.html
တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားဘဝရဲ့ အကောငျးဆုံးအခကျြဟာ လှတျလပျမှု ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အိပျမကျတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ လလေ့ာလှုပျရှားမှုစှမျးရညျတှကေို ပိုတိုးတကျစသေလို အသငျးအဖှဲ့ရဲ့ သဘောသဘာဝတှကေို ပိုပွီး နားလညျစပေါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ သငျ့ရဲ့ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားဘဝကို ပိုပွီး အဓိပ်ပာယျပွညျ့စုံကောငျးမှနျစမေယျ့ အကွံပွုခကျြလေးတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော..
(၁) Activities (လှုပျရှားမှု) မြားလုပျပါ
သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျကြောငျးသှား၊ အိမျပွနျ ၊ အပွငျဘကျ အတနျးသှားတာက လှဲလို့ တခွားဟာတှေ ဘာမှမလုပျဘူးဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ ကြောငျးသားဘဝဟာ သာမနျပါပဲ။ သငျဘာကို စိတျဝငျစားလဲ? ဒီအခြိနျမှာ အဲဒီစိတျဝငျစားတဲ့အရာကို စမျးသပျကွညျ့ပါ။ အားကစားတဈခု ဒါမှမဟုတျ ဂီတတူရိယာတဈခုခု ဒါမှမဟုတျ အသဈအသဈသော လှုပျရှားမှုတဈခုခုကို ကွိုးစားလုပျကွညျ့ပါ။ ဒါဟာ ကုနျကစြရိတျနညျးနညျးနဲ့ အသဈတှကေို စမျးသပျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ ဒါတှကေ သငျ့ရဲ့နစေ့ဉျဘဝအတှကျ အသုံးဝငျတဲ့ အရညျအခငျြးတှေ (ဥပမာ ဆကျဆံရေး) ကို ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ ဖှံ့ဖွိုးကူညီပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
နိုငျငံအတှငျးမှာဖွဈစေ၊ နိုငျငံရပျခွားအတှကျပဲ ဖွဈစေ၊ လုပျအားပေးခွငျးက သငျ့ရဲ့ တက်ကသိုလျဘဝကို ပိုပွီး အဓိပ်ပာယျရှိစတေဲ့ နညျးလမျးတဈခုပါ။ ပိုမိုယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ လုပျအားပေးအဖှဲ့တှနေဲ့ အတူတူလကျတှဲပွီး အလုပျလုပျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးကို လှယျလှယျရရှိတာဟာ ကြောငျးသားတဈယောကျရဲ့ အားသာခကျြပါပဲ။ ကာလရှညျအတူတူလကျတှဲပွီး အလုပျလုပျဖို့ဆိုရငျလညျး လှယျကူတယျလေ။ လူ့အဖှဲ့အစညျးကို ကောငျးမှနျစဖေို့ ကွိုးစားအားထုတျနတေဲ့သူတှနေဲ့ တှခှေ့ငျ့ရမယျ့ အခှငျ့အရေးကွီးပေါ့။ ဒါ့အပွငျ သငျအလုပျရှာတဲ့အခါမှာလညျး သငျ့ရဲ့ကိုယျရေးရာဇဝငျက အမြားကွားမှာ ထငျရှားနမှောပါ။
အလုပျရှငျမြားအမြားစုက အလုပျအတှအေ့ကွုံ ရှိတဲ့သူ (သို့) အနညျးဆုံး လကေ့ငျြ့သငျကွားမှု ရှိတဲ့သူတှကေို ငှားရမျးဖို့ ပိုနှဈသကျတယျဆိုတာ အတျောမြားမြား သိထားပွီးသားပါနျော။ တက်ကသိုလျတကျတဲ့အခါ ကြောငျးပိတျရကျရှညျ ၂ခါ လောကျတော့ အနညျးဆုံး ရှိမှာပေါ့နျော.. ဒီအခြိနျတှအေတှငျးမှာ တဈလဖွဈဖွဈ၊ လအနညျးငယျ ဖွဈဖွဈ၊ ကုမ်ပဏီတဈခုခုဖွဈစေ၊ ကိုယျစိတျဝငျစားရာ ပရောဂကျြဖွဈစေ ဝငျလုပျပါ။ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံကသာ အမှနျတကယျ လကျတှလေ့ောကရဲ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ အလုပျအခွအေနတှေကေို သခြောမွငျစတောပါ။
(၄) Exchange သှားပါ
ယနခေ့တျေအလုပျခှငျတှမှော ယဉျကြေးမှုပေါငျးစုံကို ပိုတှလေ့ာရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ယဉျကြေးမှုနောကျခံကလာတဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့အတူ အလုပျလုပျနိုငျတာက အရေးကွီးတဲ့စှမျးရညျ ဖွဈလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့တက်ကသိုလျက ကြောငျးဖလှယျသှားဖို့ အခှငျ့အရေး ကမျးလှမျးရငျ ရအောငျယူလိုကျပါ။ ဒါဟာ အခွားယဉျကြေးမှု နဲ့ ကြောငျးသားဘဝကို တှကွေုံ့နိုငျမယျ့ ရှားပါးတဲ့ အခှငျ့အလမျးဖွဈပါတယျ။ အမြားနဲ့မတူဘဲ အလားအလာကှဲပွားခွားနားတဲ့ ရှုထောငျ့ကနေ ကွညျ့တတျဖို့ သငျယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ပိုအရေးကွီးတာက ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ယဉျကြေးမှုတှကေို ပိုနားလညျတတျလာပွီး Cross-cultural respect လို့ချေါတဲ့ တဈဘကျယဉျကြေးမှုကိုလေးစားမှု အလအေ့ထလညျး ဖှံ့ဖွိုးလာပါလိမျ့မယျ။
(၅) တခွားဌာနတှကေ အတနျးတှေ ယူကွညျ့ပါ
အခွားဌာနတှရေဲ့ အစပွုအတနျး ၁ ခု၊ ၂ခု လောကျယူပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အငျဂငျြနီယာအလုပျဟာ အငျဂငျြနီယာအသိပညာအပွငျ အခွခေံဘဏ်ဍာရေးအသိပညာနဲ့ တငျဆကျမှုစှမျးရညျတှရှေိဖို့လညျး လိုအပျတယျ။ စဉျးစားတှေးချေါမှု နညျးလမျးအမြိုးမြိုးကို သိခှငျ့ရတဲ့အပွငျ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုရှိတဲ့ ကြောငျးသားတှကေို တှဆေုံ့ဖို့ အခှငျ့အလမျးတှေ ရပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ရဲ့တက်ကသိုလျနှဈဟာ သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ကာလတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ယခုအခြိနျဟာ သငျ့ရဲ့အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနဲ့ နောငျရေးကို ပုံဖျောပေးနိုငျတဲ့ ကာလလေးပါ။ သငျ့ရဲ့ အိပျမကျဆီကို လမျးညှနျပေးနိုငျမယျ့သူတှနေဲ့လညျး တှဆေုံ့နိုငျပါသေးတယျ။
ပညာရပျအမြိုးမြိုးကို သငျယူခငျြပမေယျ့ သငျတနျးသှားတကျဖို့ အခြိနျမပေးနိုငျဖွဈနပေါသလား။ စိတျမပူပါနဲ့။ sayar.com.mm တှငျ ရှာဖှလေိုကျပါ ... သငျ့ဆီတိုကျရိုကျလာသငျပေးနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြး ပွညျ့ဝပွီး ပညာရပျအမြိုးမြိုးကို သငျကွားပေးနိုငျမယျ့ ဆရာတှေ ရှိပါတယျ။
Credit; For Her Myanamr
AutoCAD သငျကွားပေးသော ဆရာ၊ ဆရာမမြား >>> https://www.sayar.com.mm/subjects/all-teachers/subject-228.html
Read times Last modified on Saturday, 15 February 2020 14:10